Wacyi gelin ku saabsan Covid-19 – Qeybta kala fogaanshaha & Nadaafada – MANABOLYO NEWS
Nadaafada jirka ee Covid -19
Qiyaastii 3dii qofba 1 ee qaba coronavirus ayaan laheyn wax calaamado ah waana fidi karaan iyadoo aan la ogaan.
Waa muhiim in qof kastaa uu ilaaliyo dabeecadaha soo socda:
GACMAHA – Dhaq gacmahaaga si joogto ah iyo 20 ilbidhiqsi.
WAJIGA – Xidho weji daboolaya meelaha gudaha ah ee kala fogaynta bulshada ay ku adkaan karto, iyo halka aad kula kulmi doontid dadka aan caadi ahaan la kulmin.
SPACE – Ka fogow 2 mitir dadka aadan la nooleyn halka ay suurta gal tahay, ama 1 mitir oo taxaddar dheeri ah meesha kujiro (sida xirashada weji daboolan ama hawo kordhinta guriga).
Waa muhiim inaad la kulanto dadka aadan la nooleyn banaanka halka ay suurtagal tahay. Haddii aad la kulanto dad aadan guriga kula nooleyn, sida qof ka shaqeynaya gurigaaga, waa inaad hubisaa inaad u ogolaato hawo badan oo nadiif ah intii aad kari karto adigoon qabow kula qabsaneyn (tusaale ahaan daaqadaha fur).
Kala fogaanshaha bulshada ee Covid -19
Si loo yareeyo halista qaadista ama faafinta fayraska loo yaqaan ‘coronavirus’, waa inaad yaraysaa waqtiga aad ku qaadato dadka aan la nooleyn, iyo marka dadka kale ay hubiyaan inaad laba mitir u dhexeyso qof kasta oo aan reerkaaga ka mid ahayn ama aan taageerin xumbada.
Kala fogeynta bulshada ayaa lagama maarmaan u ah joojinta faafitaanka fayraska, maadaama ay u badan tahay inuu fido marka dadku isku dhow yihiin. Qofka cudurka qaba wuxuu ugu gudbin karaa fayraska hadalka, neefsashada, qufaca ama hindhisada xitaa haddii uusan lahayn wax calaamado ah.
Markaad la joogto dadka aadan la noolayn, waa inaad sidoo kale iska ilaaliso: taabashada jirka; isu dhowaansho iyo fool-ka-fool; oo ku qaylinaya ama ku heesaya agtooda. Sidoo kale waa inaad ka fogaataa meelaha dadku ku badan yahay oo dad badani joogaan; iyo taabashada waxyaabo ay dadka kale taabteen
Dowlada Kenya : Waxaan baareeynaa geeridii ku timid madaxweynihii hore Somaliya oo Nairobi ku dhintey